पूर्वी रोल्पाको एक मात्र रेडियो - गाउँले मन : Khemraj Gaunle's Personal Blog
Home » कथा » मेरो डायरी » पूर्वी रोल्पाको एक मात्र रेडियो
पूर्वी रोल्पाको एक मात्र रेडियो
पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको लामो समय भइसके पनि म कतै सञ्चारमाध्यममा जोडिन सकेको छैन । राजधानीसँग जोडिनलाई राजनीतिक दलसँग जोडिनुपर्ने रहेछ । म त्यसरी जोडिन सकेनँ । आफूसँग भएको क्षमता र योग्यता प्रयोग गर्ने हो । योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै किन अरुको भर पर्ने ? यो मेरो मान्यता हो । त्यसैले पनि नेताको नजिक हुन सकेनँ । त्यसैको प्रतिफल हो, मैले पत्रकारितामा प्रगति गर्न नसकेको । त्यसैले मलाई राजधानीले चिन्दैन तर मैले राजधानीलाई चिनिसकें रोल्पामै बसेर ।
सञ्चार क्षेत्रमै रहेर केही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच रेडियो रोल्पा छाडेदेखिकै हो । सदरमुकाम लिबाङमा रेडियो रोल्पा, रेडियो जलजला र होलेरीमा सुनछहरी रेडियो गरी जिल्लामा ३ वटा सामुदायिक रेडियो छन् । यिनीहरुले खासै समुदायका आवाज बोल्न सकेका छैनन् । राजधानीबाट प्रसारण भएका कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्नमै व्यस्त छन् रेडियोहरु । समाजको आवाज जहाँको तही छ । रेडियोहरुमा साउन नलाग्दै तीजका गीतहरु घन्कन थाल्छन्, तीज नसकिदै दशैंका गीत घन्कन थाल्छन्, दसैं नसकिदै तिहारका गीत घन्कन थाल्छन् । हिन्दी गीतहरु पनि घन्कन्छन् । यसो गर्दा समाजमा कस्तो असर पर्छ भन्ने ख्याल नै छैन, रेडियोहरुलाई ।
रेडियोको वेवसाइट पनि सञ्चालन गरें । रेडियोका सबै कार्यक्रमहरु वेवसाइटमा राखें । रेडियोको फेसबुक पेज पनि खोलें । वेवसाइट र वेवसाइटमा रहेका कार्यक्रमहरु फेसबुक पेजमार्फत बाँडें । अब रेडियो गाउँमा मात्र सीमित रहेन । देश तथा विदेशमा सुनिन थाल्यो । राम्रो प्रतिक्रिया पनि आउन थाल्यो । लिबाङमा बस्ने मेरा पत्रकार साथीहरुले पनि वेवसाइटबाटै रेडियो सुनें ।
सामुदायिक रेडियो भएर खै समुदायको बोली बोलेको ? आफैले आफैलाई प्रश्न गर्छु । अनि समाजको बारेमा गम्भीर भएर सोच्छु, सागरभन्दा तल पसेर । यही सोचाइले गर्दा नै मेरो सपना आज वास्तविकतामा परिणत भएको छ । सामुदायिक रेडियो भएपछि त समुदायकै बोली बोल्नुपर्ने आवश्यकता देखें । जसले गर्दा खुमेलस्थित चौरपानीमा मैले रेडियो स्थापना गरें । ५० वाट क्षमता रहेको यो डोको रेडियोको नाम रह्‍यो, ‘रेडियो चौरपानी’ । रेडियो अहिले पूर्वी रोल्पाका अधिकांस गाविसहरुमा सुनिनुका साथै प्युठानको सारी, भिंग्री र पर्यटकीय स्थल स्वर्गद्वारीमा समेत राम्रो सुनिन्छ । यहीका जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर रेडियोमा कार्यक्रमहरु बनेका छन् ।
रेडियो चलाउनका लागि मैले गाउँमै रेडियो पत्रकारिता तालिमको आयोजना गरे । काँशीराम डाँगी, घनश्याम आचार्य, खेम बुढामगर, मौसम रोकामगर, धरेन्द्र डाँगीलगायतका रोल्पाका अग्रज पत्रकारहरुले तालिम दिनुभयो । रेडियो उद्घोषण तालिम लिएका ती प्रशिक्षार्थीहरु नै अहिले कार्यक्रम चलाउँछन् । खुमेलका साथै मिझिङ, गजुलबाट समेत रेडियोमा कार्यक्रम चलाउन आउँछन् । पूर्वी रोल्पाका धेरैजसो श्रोताहरुले यस रेडियोलाई माया गर्छन् ।
रेडियोमा फोनिङ कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन हुन्छ । सिडिएमए स्काई फोनबाट कार्यक्रमहरु चल्छ । ललित साहित्य परिषद् रोल्पाले आफ्नो ०८६–६८०१३८ नम्बरको सिडिएमए फोन रेडियोलाई सहयोग गरेको हो ।
आजसम्म सहयोगकै भरमा रेडियो चलेको छ । रेडियोमा प्रयोग भएका सामानहरु मैले किन्न एक पैसा पनि खर्च गर्नु परेको छैन । लिबाङमा बस्दा राजनीतिक दल, संघसंस्था, पत्रकार, साहित्यकारहरुसँगको चिनाजानले गर्दा नै सहयोग जुटाउन गाह्रो परेन ।
रेडियो राम्रोसँग चलिरहेको छ । तर रेडियोलाई एउटा रेकर्डरको आवश्यकता पर्न थाल्यो । हरेक महिना आयोजना हुने ‘स्रष्टा चौतारी’ मैले यो कुरा साहित्यकारमाझ राखें । साहित्यकार गौरीकिरण डाँगीले एउटा राम्रो रेकर्डर रेडियोलाई किनिदिने वचन दिनुभयो । सोही कार्यक्रममा रेडियोमा साहित्यिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने बारेमा छलफल भयो । राप्ती साहित्य परिषद् जिल्ला शाखा र ललित साहित्य परिषद् रोल्पाले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत भयो ।
देश तथा विदेशमै प्रसिद्धी कमाइ सक्यो । जिम्मेवारी पनि झन बढ्दै गयो । रेडियोका सरोकारवालसँग छलफल गर्नुपर्ने सोचें । गाउँका सुभचिन्तकहरुलाई रेडियोमा बोलाएँ । बोलाएका जति सबै रेडियोमा आइसकेका थिए । रेडियोको बारेमा छलफल गर्दै थियौ । रेडियो चौरपानीलाई अब दर्ता गरी ५०० वाट क्षमताको बनाएर सञ्चालन गर्ने सुझाव दिए कसैले भने कसैले यसैलाई नै निरन्तरता दिने सुझाव दिए ।
गाउँका कुरा गाउँमा मात्रै पुर्‍याएर पुगेन । अब गाउँका कुरा सहरतिर पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरें । यसका लागि सजिलो उपाय इन्टरनेट थियो । गाउँमा इन्टरनेट कसरी चलाउने गाह्रो छ । ल्यान्डलाई फोन पुगेको छैन गाउँमा । अरु इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु पनि छैनन् गाउँमा । यसको सजिलो उपाय ‘वाइम्याक्स’बाट नेट चलाउने सोचें । वाइम्याक्स सञ्चालनका लागि लिबाङस्थित शुभ मोबाइल एण्ड कम्प्युटर्सका वीरेन्द्र श्रेष्ठले जडानका सम्पूर्ण सामानहरु निःशुल्क सहयोग गर्नुभयो ।
अब रेडियोमा नेट चलाउन अझ सहज भयो । रेडियोको वेवसाइट पनि सञ्चालन गरें । रेडियोका सबै कार्यक्रमहरु वेवसाइटमा राखें । रेडियोको फेसबुक पेज पनि खोलें । वेवसाइट र वेवसाइटमा रहेका कार्यक्रमहरु फेसबुक पेजमार्फत बाँडें । अब रेडियो गाउँमा मात्र सीमित रहेन । देश तथा विदेशमा सुनिन थाल्यो । राम्रो प्रतिक्रिया पनि आउन थाल्यो । लिबाङमा बस्ने मेरा पत्रकार साथीहरुले पनि वेवसाइटबाटै रेडियो सुनें ।
गाउँमा भएका गतिविधिहरु रेडियोमा समाचार बनेर बज्छन् । बेलुकी ७ बजेको ‘चौरपानी हालखबर’मा स्थानीय खबरहरु मात्र बज्छन् । एकदिन रेडियो रोल्पाका स्टेसन म्यानेजर घनश्याम आचार्य र रेडियो जलजलाका स्टेशन म्यानेजर मौसम रोकामगरले मलाई लिबाङमा बोलाउनुभयो । म लिबाङ झरें । रेडियोको बारेमा छलपफल भयो । उहाँहरुले रेडियोमा हरेक दिन बज्ने ‘चौरपानी हालखबर’ रेडियो रोल्पा र रेडियो जलजलाबाट समेत प्रशारण गर्ने कुरा गर्नुभयो । मलाई निकै खुसी लाग्यो । मैले सहर्ष स्वीकारी दिएँ । अब सदरमुकाममा रहेका दुवै रेडियोबाट रेडियो चौरपानी बज्ने चौरपानी हालखबर प्रशारण गर्न थालियो । यसले गर्दा चौरपानी रेडियोको चर्चा रोल्पा जिल्लाभरि लगायत आसपासका क्षेत्रमा हुन थालेको छ ।
शहरका कुराहरु पनि रेडियोबाटै गाउँगाउँसम्म पुग्छ । शहरका कुरा पनि सुनिने भएकालेले स्रोताहरु खुसी छन् । स्रोताहरुकै मायाले रेडियो चौरपानी बाँचेको छ ।
देश तथा विदेशमै प्रसिद्धी कमाइ सक्यो । जिम्मेवारी पनि झन बढ्दै गयो । रेडियोका सरोकारवालसँग छलफल गर्नुपर्ने सोचें । गाउँका सुभचिन्तकहरुलाई रेडियोमा बोलाएँ । बोलाएका जति सबै रेडियोमा आइसकेका थिए । रेडियोको बारेमा छलफल गर्दै थियौ । रेडियो चौरपानीलाई अब दर्ता गरी ५०० वाट क्षमताको बनाएर सञ्चालन गर्ने सुझाव दिए कसैले भने कसैले यसैलाई नै निरन्तरता दिने सुझाव दिए । यति नै बेला छेवैको कोठामा प्राविधिकले ठूलो स्वरमा गीत घन्कायो ।
बैठकलाई असर पर्ने गरी गीत बजाएको हुँदा म बैठक कोठाबाटै ठूलो स्वरमा बोलेँ, ‘गीत बन्द गर ।’
म झसँग भए । आफ्नै आवाज आफैले सुनेर म निद्राबाट ब्युँझिएँ । नवीन सर हाँसिरहनुभएको थियो । घडी हेरें रातको १ बज्नै लागेको रहेछ । गीत बजाउँदै सनस्टार सेटिङ गरिरहनुभएको रहेछ । मेरो ल्यापटप बन्द भइसकेको रहेछ, आफै । म केही बोलिनँ । सपना मनभित्रै राखें । अनि ल्यापटप खोलें । म पनि सनस्टारको सेटिङ तथा सम्पादनतिर लागें । किनकि भोलि बिहानै पत्रिका बजारमा पुर्‍याउनु छ ।
प्रकाशक : खेमराज गाउँले
विधा : कथा, मेरो डायरी
Khemraj Gaunle / Khumel, Rolpa, Nepal
शब्दसारथि साहित्यिक त्रैमासिक
Tweets by @KhemrajGaunle
'गाउँले मन' मुक्तकसङ्ग्रह (२०७०)
गाउँले मनलाई हेर्नेहरुको संख्या
गाउँले मन . Powered by Blogger.
दस्तावेज February 2020 ( 1 ) November 2019 ( 1 ) October 2019 (2) September 2018 ( 1 ) July 2018 ( 1 ) September 2017 ( 1 ) December 2016 (3) November 2016 ( 1 ) April 2016 ( 1 ) December 2015 (2) October 2015 ( 1 ) September 2015 ( 1 ) April 2015 (3) March 2015 (3) February 2015 (2) January 2015 ( 1 ) September 2014 (4) August 2014 (6) July 2014 (2) May 2014 ( 1 ) April 2014 (2) March 2014 ( 1 ) January 2014 (4) December 2013 (9) November 2013 (6) October 2013 ( 11 ) September 2013 (2) July 2013 ( 1 ) June 2013 ( 1 ) April 2013 (5) December 2012 ( 1 ) October 2012 ( 1 ) September 2012 (3) August 2012 ( 1 ) May 2012 (2) March 2012 ( 1 ) December 2011 ( 1 ) November 2011 ( 1 ) August 2011 (5) July 2011 (2) June 2011 ( 1 ) March 2011 (3) February 2011 ( 1 ) January 2011 (2) November 2010 (3) October 2010 ( 1 ) September 2010 (3) May 2010 ( 1 ) April 2010 ( 1 ) March 2010 (2) January 2010 (3) December 2009 (4)
Model अन्तर्वार्ता कथा कविता केस्रा ख्याली गजल गजलै गजल गीत चिठ्ठी ट्विटरबारे डिजाइन निर्वाचन २०७० निवन्ध पत्रपत्रिकामा गाउँले परिवार फोटो फिचर भिडियो मुक्तक मेरो डायरी युट्युव लघुकथा लेख विविध समाचार समीक्षा संस्मरण हाइकु
नेपाली मिति र बदल्ने तरिका
थबाङ चिनारी (परिचय पन्नासहित)
कथाः चिया पसल्नी
निबन्धः रेडियो चौरपानीको कथा
रोल्पा जिल्लाको नक्सा
मनभित्र मुक्तकको ध्वनि
भैसीपूजादेखि महरा देवालीसम्म (१५ फोटाहरू)
मनभित्र नअटाएका भावनाहरुको सङ्ग्रह–‘गाउँले मन’मा यहाँलाई आत्मीय स्वागत गर्दछु । –खेमराज गाउँले
रोल्पाका स्थानीय तहहरू
एन.सि.सि. बैंक, सुलिचौर
प्राय जसो स्थानिय तहमा सोधिने प्रश्नहरु!!!!
सावित्रा कुमारी बुढा (घर्ती)
सुनछहरी गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय
उत्कृष्‍ट तीन पोष्‍टहरु
तथ्याङ्कमा थबाङ गा.वि.स. – जिल्ला सदरमुकाम लिबाङदेखिको दुरी – २८ कोस – थबाङ गा.वि.स.को जम्मा घरधुरी – ९४४ – थबाङ गा.वि.स.को जम्मा ...
खेमराज गाउँले जाडो बढ्दै थियो । पुस महिना सुरु भएपछि लिबाङमा जाडो पनि हृवात्तै बढ्न थाल्छ । यसपालि पनि चिसो बढेको छ । म डेराबाट निक...
खेमराज गाउँले पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको लामो समय भइसके पनि म कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा अझैसम्म जोडिन सकेको छैन । राजधानीसँग जोडिनलाई राज...
Copyright © गाउँले मन : Khemraj Gaunle's Personal Blog All Right Reserved